5 Koorsooyinka Suuqgeynta Dijitaalka ah ee Onlineka ah ee bilaashka ah oo wata shahaadooyin Google 2022
5 Koorsooyinka Suuqgeynta Dijital ah ee Onlineka ah ee bilaashka ah oo ay wataan shahaadooyin Google
Koorsooyinkan Suuqgeynta Dijital ah ee Onlineka ah ee Bilaashka ah ee wata Shahaadooyinka Google, waxaad gacanta ku heli doontaa koorsooyin dhijitaal ah oo aadan si fudud online uga heli karin. Erayga "suuqgeynta dhijitaalka ah ee khadka tooska ah" ayaa laga yaabaa inuu u ekaado wax aan macquul ahayn ama aan la soo koobi karin, laakiin waxaan hubaal ah in aan haysano suuqgeyn dhijitaalka ah oo khadka tooska ah (inkastoo laga yaabo in aan ogaano).
Marka hore, adduunka dhijitaalka ah, waxaan ognahay in internetka uu xiriir la leeyahay internetka, offline waa haddii kale. Suuqgeynta dhijitaalka ah ee khadka tooska ah, sida suuq-geynta raadiyaha iyo telefishinka, waxaa laga yaabaa inay ku lug yeeshaan qalabka elektiroonigga ah laakiin uma baahna intarneetka si uu u shaqeeyo.
Sidoo kale, boodhadhka elektiroonigga ah waxay qabtaan shaqo suuqgeyn dhijitaal ah oo aad u wanaagsan iyada oo aan la helin internetka. Markaa haddii aad ku jirto waaxda iibka ama aad waligaa ka shaqeysay, "wicitaanka qabow” waa hab aad taqaan.
Oo uma baahnid inaad internetka ku xidho si aad u soo qaadato teleefankaaga oo aad u samayso wicitaanadaas, sax?
Suuqgeyntu waa sidii ilbaxnimada oo kale, inkastoo aan loo aqoon suuqgeyn, markaa. Waan ogahay in ay gebi ahaanba ka duwan tahay waxa aynu u naqaan suuqgeyntu sida maanta, laakiin aadanuhu waligood wax bay ganacsanayeen muddo dheer.
Horaantii, qarniyadii 18-aad iyo 19-aad, baahida alaabadu waxay mar walba ka sarraysay saadka, waxaa jiray tartan yar ama ma jirin. Ilaa qarnigii 20aad markii suuqgeyntu noqotay in ka badan inta iib ee aad samaysay.
Tartanku wuu koray, baahida loo qabo xayaysiisna waxa ay noqotay amarka maalintaas. Meherad kastaa waxay rabeen inay u muuqato lambarka koowaad ee wejiga macaamiisha.
Laakiin hadda, suuqgeyntu waa sida qol weyn oo qof kastaa ka hadlayo. Iyo, kaliya kuwa yar ee qaata koorsooyinka suuqgeynta dhijitaalka ah ee tooska ah ee bilaashka ah ee wata shahaadooyinka google ayaa ku hadli kara makarafoon.
Suuqgeeyayaashu aad bay muhiim ugu yihiin ganacsiga adduunka, gaar ahaan qarnigan hadda aynu joogno. Waxay halkaas u joogaan inay kala taliyaan ganacsiga badeecada ama adeegga u fiican macaamiisha, waxa ay macaamiishu dalbanayaan.
Sidoo kale, waxay ku wargeliyaan halka ay ka jirto baahida sare ee badeecad gaar ah, iyo inta ay tahay in la iibiyo. Ganacsi kasta oo weyn waa ogyahay in aysan samayn karin la'aantood suuqgeynayaasha dhijitaalka ah.
Ilaah baa mahad leh algorithms-ka, fahanka, iyo sahannada onlaynka ah ee inta badan goobaha online ka. Waxay ka caawisay suuqgeynayaasha dhijitaalka ah inay qiimeeyaan halka ay macaamiishooda joogaan iyo waxay u baahan yihiin.
Waa maxay Suuqgeynta Dijital ah?
Koorsooyinka Suuqgeynta Dijital ah ee Onlineka ah ee Bilaashka ah oo wata Shahaadooyin Google-ka ah
1. Aasaaska Suuqgeynta Dijital ah
3. Raadi Xayeysiisyada 360 Koorsada Shahaadada (dhexe)
4. Koorsada Shahaadada ee Maareeyaha Ololaha (Dhexe)
5. Koorsada Shahaadaynta Khibrada Mobilka
Sideen Google uga heli karaa shahaado bilaash ah?
Ma ku heli karaa shaqo shahaadada Google?
Suuqgeynta dhijitaalka ah waa habka kor loogu qaado badeecadaha ama adeegyada iyada oo loo marayo agabka elegtarooniga ah sida telefoonada, kombayutarada, telefishinada. Waxaan aragnaa xayeysiisyadan ama ololeyaashan ama xayeysiisyadan ku dhawaad ​​maalin kasta oo nolosheenna ah.
Ilaa inta aad akhrinayso qoraalkan, waxaad aragtay qaar ka mid ah xayeysiisyada dhijitaalka ah. Dhab ahaantii, 89% dadka Maraykanka ah ee ku isticmaala internetka mobilada, waxay inta badan la kulmaan suuqgeyn dijital ah.
Markaa, waxaad arkaysaa, helitaanka koorsooyin suuq-geynta dhijitaalka ah oo khadka tooska ah oo bilaash ah oo wata shahaadooyin google-ku leeyahay waxay noqon lahayd mid xiiso leh. Gaar ahaan, sababtoo ah shirkado badan ayaa raadinaya hab ay wax ugu kharash gareeyaan ROI ugu fiican.
Markaa, haddii aad tahay jawaabta ugu fiican ee dhibaatadan, waxay ku degdegi doonaan albaabkaaga. Intaa waxaa dheer, dunidu way ogtahay qiimaha xirfaddan, waana sababta 2019, ay ku bixiyeen in ka badan $ 43.8 bilyan software marketing digital.
Waxyaabaha bilaashka ah macnaheedu maaha inay xumaanayaan (inkasta oo qaybo ka mid ah agabka bilaashka ah ay yihiin). Laakiin wakhti iyo wakhti waxaanu aragnay in Google uu soo saari karo kuwa ugu fiican oo uu wali ka dhigi karo bilaash, sax?
Si loo xuso dhowr, waxaad haysataa Gmail ka kooban baakado fiican oo lagugu siiyay saxan dahab ah. Haddii aad tahay isticmaale Android, waxaad haysataa Khariidado, Google Drive, Sawirro, Calendar, Play Store.
Adiga iyo anigu waan ognahay sida ay u wanaagsan yihiin alaabtan bilaashka ah mana jirto qaab xayeysiis ah oo naga dhigaya kuwo aan ku raaxaysanayno inta aan isticmaaleyno. Kala hadal wax badan oo ku saabsan koorsooyinkooda suuq-geynta dhijitaalka ah ee tooska ah ee bilaashka ah ee wata shahaadooyinka google.
Halkan waxaa ah liiska koorsooyinka suuqgeynta dhijitaalka ah ee tooska ah ee bilaashka ah oo wata shahaadooyin Google-ka ah
Aasaaska Suuq-geynta Dijital ah
Akademiga Google Analytics
Raadi Xayeysiiska 360 Koorsada Shahaadada (dhexe)
Koorsada Shahaadaynta Maareeyaha Ololaha (Dhexe)
Koorsada Shahaadaynta Khibrada Mobilka
Tani waa mid ka mid ah koorsooyinka suuqgeynta dhijitaalka ah ee tooska ah ee bilaashka ah oo wata shahaadooyin Google-ka oo xiiso leh in la barto. Gaar ahaan calaamadaha aad kasban doonto markaad wax baranayso.
Module kasta oo aad dhammayso waxa ku jira calaamad lagugu siiyay. Tani waxay kugu dhiirigelinaysaa inaad sii wadato waxbarashada.
"Fursada online-ka ah"waa cutubkoodii ugu horreeyay ee noocaan ah oo kugu soo dhaweynaya fasalka suuq-geynta dhijitaalka ah. Waxay ku wargelinayaan sida ay u ballaadhan tahay suuqgeynta dhijitaalka ah.
Iyo, sida uu muhiim u yahay Garage Dijital ah ee Google. Sidoo kale, si loo fududeeyo, koorsooyinka suuqgeynta dhijitaalka ah ee khadka tooska ah ee bilaashka ah oo wata shahaadooyin google ayaa bixiya muuqaalo bilaash ah.
Haddii aadan rabin inaad isticmaasho qoraalkooda, muuqaal la mid ah qoraalka qoraalka ayaa diyaar ah. Intaa waxaa dheer, cutub kasta ka dib, waxaad qaadan doontaa kedis si aad u tijaabiso aqoontaada cutubka la soo gabagabeeyay.
Haddii aad ku gudubto kediska, waxaad u guuraysaa casharka xiga, laakiin haddii aad guul daraysato, waxaa laguu oggolaan doonaa inaad dib u soo celiso kediska. Xitaa haddii ay ahayd hal su'aal oo aad ku guuldareysatay, waxaad dib u qaadan doontaa kediska.
Kediska ka dib, waxay ku siin doonaan xiriirin dheeri ah iyo agab si ay kuugu suurtagasho inaad wax badan ka barato cutubkaas.
Ugu dambayntii, waxa laga yaabaa in lagu siiyo pdfs oo ka kooban tafaasiil waxtar leh oo ku saabsan cutubka la soo gabagabeeyay. Tusaale ahaan, cutubka koowaad, waxaa ku jira "Digital Suuqgeynta Jargon Buster" pdf ah oo leh suuqgeyn dijital ah.
Intaa waxaa dheer, inta badan cutubyada waxaa loo qaybiyaa casharo kala duwan. Tusaale ahaan, cutubka koowaad wuxuu leeyahay laba cashar.
Iyo, casharkii labaad, waxay ku sii dheeraadeen inay kuu iftiimiyaan sida dunidu u saameyn karto ganacsigaaga marka la barbar dhigo habka soo jireenka ah ee ganacsiga. Bal qiyaas marka macaamiishu ay ku baaraan ereyga muhiimka ah, oo ganacsigaagu u muuqdo xalka ugu horreeya.
Haa, tani waa mid ka mid ah waxyaalaha koorsooyinka suuqgeynta dhijitaalka ah ee tooska ah ee bilaashka ah ee wata shahaadooyinka google ay ku siin doonto faham. Waxayna ku bari doonaan talaabooyinka aad raacayso si aad u bilowdo ka faa'iidaysiga booska dhijitaalka ah.
Midkee ku jira "dejinta miisaaniyad macquul ah."
Marka aad dhammayso dhammaan casharrada su'aalahooda, waxa jira hal kedis oo kama dambays ah iyaga. Tani waxay kaa caawinaysaa inaad hubiso inaad xasuusato waxaad baratay.
Marka aad dhammayso module kasta, calaamad ayaa lagu siin doonaa.
Waxa fasalka ku jira 26 qaybood oo ay ka mid yihiin;
Fursada online-ka ah
Talaabadaada ugu horeysa ee guusha online
Dhis joogitaankaaga shabakadda
Qorshayso ganacsigaaga onlaynka ah
Ku bilow raadinta
Hel raadinta raadinta
Ka dhig raadinta shaqo adiga
La soco xayeysiisyada raadinta
Horumari ololahaaga raadinta
U fiirso gudaha
Ka caawi dadka kuu dhow inay online kugu helaan
La soco baraha bulshada
Si qoto dheer u dhex gal baraha bulshada
Soo ogow suurtogalnimada mobilka
Mobilku ha kuu shaqeeyo
Ka bilow suuqgeynynta nuxurka
Ku xidh iimaylka
Ku xayeysiiso mareegaha kale
Qoto dheer u gal xayeysiinta bandhigga
Ka faa'iidayso muuqaalka
Ku bilow falanqaynta
Guul ku hel falanqaynta
Xogta u rog aragtiyo
Dhis dukaankaaga onlaynka ah
Wax badan ku iibi onlayn
Si caalami ah u balaadhi
Marka aad dhammayso dhammaan qaybahan, koorsooyinka suuqgeynta dhijitaalka ah ee tooska ah ee bilaashka ah oo wata shahaadooyin Google ayaa ku siin doona imtixaan u baahan ugu yaraan 80% guul. Imtixaanku maaha mid adag in lagu gudbo, waa imtixaan heer-bilowga suuq gaynta dhijitaalka ah.
Oo, waxaad u gudbin kartaa isku daygaaga ugu horreeya. Ilaa iyo inta aad si sax ah u soo martay fasallada.
Intaa waxaa dheer, imtixaanku wuxuu ka kooban yahay 40 su'aalood oo kala doorasho ah, waxaadna u baahan tahay inaad si sax ah u hesho ugu yaraan 32 su'aalood. Google ayaa ku siin doonta 70 daqiiqo si aad uga jawaabto, taas oo wakhti kugu filan.
Si kastaba ha ahaatee, haddii aadan ku gudbin imtixaanka, waxaa lagu siinayaa 24 saacadood si aad u qaboojiso ka hor inta aadan ku soo laaban imtixaanka (marka aad rabto).
Tan ugu muhiimsan, haddii aad ku gudubto imtixaanka, waxaa lagu siin doonaa a kharash la'aan shahaadada suuq-geynta dhijitaalka ah taas oo dunida laga aqoonsan karo.
Booqo Aasaaska Kooras Suuqgeynta Dijital ah Website
Falanqaynta Google waa qayb-hoosaadyo koorsooyin suuq-geynta dhijitaalka ah oo khadka tooska ah oo bilaash ah oo wata shahaadooyin google ah. Falanqaynta Google waa sida barnaamijka shahaadada mastarka, halkaas oo aad hadda rabto inaad qeexdo niche gaar ah.
Waxay ku baraysaa hab-dhaqanka macmiilka iyo is-dhexgalka. Iyada, waxaad ku baran doontaa sida loo habeeyo maqaarkaaga ilaa macmiilku beddelo.
Waxaa jira lix koorso Akademiga Google Analytics
Google Analytics ee Bilowga
Advanced Analytics Google
Google Analytics ee Isticmaalayaasha Awoodda
Ku Bilaabashada Google Analytics 360
Hordhac Studio Data
Aasaaska Google Tag Manager
Falanqaynta Google ee bilowga ah, waxaad wax badan ka baran doontaa aragtida dhagaystayaasha iyo dhaqankooda. Waxa kale oo lagu bari doonaa sida loo cabbiro taraafikada mareegaha.
Waxa kale oo aad baran doontaa waxa uu yahay hab-dhaqanka online-ka ah ee uu macmiilku gato, ama hab-dhaqanka khadka ee macaamiishu beddeleen. Waxay ahayd xayeysiisyadaadii? Sawirka? Mise xitaa waxa ku jira?
Tusaale ahaan, Haddii aad leedahay shirkad isqurxin, oo aad damacsan tahay inaad xayeysiiso. Markaad fahamto Google Analytics ee bilawga, waxaad baran doontaa goobta, da'da, jinsiga, tani waxay ka dhigi doontaa xayeysiisyadaada si fiican u qabtaan.
Si aad u bilowdo, waxaad u baahan doontaa si xor ah is diwaangeli adigoo ka jawaabaya qaar ka mid ah sahannada koorsada ka hor. Tani waa kaliya si aad u ogaato aqoontaada aasaasiga ah ee Google Analytics.
Tusaale ahaan, su'aasha sahanka ugu horreysa waxay leedahay;
Kahor intaanan qaadan koorsadan, waxaan fahmay mowduucyada soo socda:
Xog ururinta Google Analytics
Aad baan u raacsanahay
Dejinta xisaabaadka xisaabaadka
Waad aragtaa, ma jirto jawaab khaldan halkan, kaliya waa in la ogaado xirfaddaada. Iyo, waxaa jira 4 cutub oo koorsada.
Koorasyada suuq-geynta dhijitaalka ah ee tooska ah ee bilaashka ah ee wata shahaadooyinka google ayaa sii socday si ay u abuuraan koorsada Google Analytics ee Sare. Kaas oo sidoo kale ka kooban 4 unug.
Falanqaynta Google ee Bilowga ah ayaa ku baraysa falanqaynta warbixinnada aasaasiga ah. Dabadeed Falanqaynta Sare ee Google waxay kaa caawinaysaa inaad barato xog ururinta oo aad isticmaasho si aad u soo saarto warbixinno la fahmi karo.
Waxaad arki doontaa sida Google u ururiyo xogtooda marka ay booqdaan mareegahaaga ama mareegaha macmiilkaaga. Waxaad sidoo kale arki doontaa sida "Google ku dhuftay,” waxay ka caawinaysaa inay arkaan dookhyada luqadda macaamiisha, magaca bogga, xallinta shaashadda.
Google ayaa kula talisay, haddii aad rabto inaad qaadato imtixaanka shahaadiga ah, isku day inaad dhammayso koorsooyinka bilowga ah iyo kuwa sare labadaba. Tani waxay kaa caawin doontaa inaad si fudud uga jawaabto su'aalaha imtixaanka.
Markaad dhammayso labada koorso, waxaad sii wadi kartaa Google Skillshop imtixaankaaga shahaadiga ah. Imtixaanku waa 90 daqiiqo wuxuuna leeyahay 70 su'aalood.
Haddii aad diin ahaan u raacday koorsooyinka bilowga ah iyo kuwa sare, ma aha in aad ka niyad jabto imtixaanka. Waxaad arki doontaa su'aalo sida;
Waa maxay sifada loo baahan yahay si loo ururiyo tirada faallooyinka isticmaalayaasha lagu dhejiyay bogga shabakadda?
Warbixintee ayaa tilmaamaysa halka isticmaalayaashu ay ka bilaabaan ama ka baxaan marinka beddelka?
Warbixinnada Funnel-ka Multi-Channel, sidee loo tixgaliyaa beddelka beddelka?
Google sida caadiga ah waxay badashaa su'aalaha marka uu wakhtigu sii socdo si loo ilaaliyo xaqiiqada. Oo, waxaad u baahan tahay inaad si sax ah u hesho ugu yaraan 56 su'aalaha.
Sidoo kale, si loo ilaaliyo ansaxnimada shahaadadaada, kadib 12 bilood ee abaalmarintaada shahaadada koowaad, waxaad u baahan tahay inaad mid kale qaadato.
Ka dib guulahaaga, iyo, waxaad rabtaa inaad sii wadato raadinta xirfadda falanqaynta Google. Koorsooyin suuqgeyn dhijitaal ah oo khadka tooska ah oo bilaash ah oo wata shahaadooyin uu google sameeyay Google Analytics ee Isticmaalayaasha Awoodda la heli karo.
Koorasku wuxuu ka faa'iidaysanayaa aqoontaada sare ee Google Analytics. Waxaad baran doontaa farsamooyinka ka dhigay macaamiisha qaar inay qariyaan iyo sababta kuwa kale aysan xitaa u danayn.
Sidoo kale, waxaad arki doontaa socodka taraafig ee adiga ama macaamiishaada (yada) ku heli doona qiimaha ugu fiican. Oo baro waxa ku jira oo wax badan ka qabanaya mareegahaaga.
Falanqaynta Google ee Isticmaalayaasha Awoodda ayaa awood kuu siin doonta inaad ogaato goorta saxda ah ay tahay inaad dirto iimaylka warsidaha. Sidoo kale, waxaad u baahan doontaa inaad isdiiwaangeliso adigoo ka jawaabaya sahan.
Marka aad dhammayso cutub kasta waxa lagu siin doonaa qiimayn, taas oo ah su'aal doorasho badan. Waxa jira 4 unug iyo 4 qiimayn, marka marka aad ka gudubto 80% ama ka badan qiimaynahaas waxa lagu siin doonaa shahaado kale.
Waxaad ku soo bandhigi kartaa shahaadadaada meel kasta, oo ay ku jiraan ku darista CV-gaaga ama ku muujinta guriga.
Ku Bilaabashada Google Analytics 360 waa koorso kale oo horumarsan oo ka duwan kuwii hore loo sheegay.
Hordhac Studio Data waa mid ka mid ah koorsooyinka suuqgeynta dhijitaalka ah ee tooska ah ee bilaashka ah ee wata shahaadooyinka google si aad wax badan uga ogaato ku xidhida xogtaada.
Ugu dambayn, Aasaaska Maamulka Tag Google waxay kaa caawin doontaa inaad wax badan ka fahanto fulinta tag.
Booqo Websaydhka Rasmiga ah ee Google Analytics
Tani waa mid ka mid ah koorsooyinka suuq-geynta dhijitaalka ah ee tooska ah ee bilaashka ah ee wata shahaadooyinka Google ee kaa caawinaya inaad si gaar ah diiradda u saarto ololayaasha raadinta. Taas oo kordhinaysa Soo noqoshada Maalgashiga (ROI).
Xusuusnow, marka aad Google ka baadho, mareegaha qaar ayaa marka hore soo baxa ka hor maqaallada dabiiciga ah. Weligaa ma la yaabtay sababta ay Google-ka ugu soo galaan? Iyo, maxaa ka dhigaya xayeysiisyada ugu horreeya inay muuqdaan, ugu horeysay.
Xayeysiisyadan waxaa bixiya Google. Iyo, milkiilayaasha mareegahaan waxay raadinayaan khabiiro si sax ah u dalban kara ereyada muhiimka ah si ay ugu soo baxaan Google Advertisement Search Engine.
Si aad u sii wadato koorsadan bilaashka ah, waxaa lagugula talinayaa inaad qaadato Aasaaska Koorsada Suuqgeynta Dijital ah. Tani waxay kaa caawin doontaa inaadan lumin markaad kooras ballaaran ka baraneyso Xayeysiiska Google.
Koorsada, waxaad ku baran doontaa;
Sida loo dhiso ololahaaga raadinta ugu horreeya
Sida loola kulmo yoolalkaaga xeeladaha dalabka
Sida loo ururiyo aragtiyaha goobidda ee daadka
Sida loo cabbiro waxqabadka ololaha raadinta
Sida loo hagaajiyo beddelka offline
Sida loo cabbiro guusha qalabka
Sida loo hagaajiyo socodka shaqadaada xaashiyo badan
Sida loo calaamadiyo ololahaaga guusha
Sida loo dejiyo yoolalka ololaha raadinta
Sida loo maareeyo ololaha raadinta si hufan
Sida loola macaamilo macaamiisha xayeysiis la beegsaday
Sida loo hagaajiyo DoubleClick Search content
Sida loo wanaajiyo aragtiyo dhammaystiran
Sida loo hirgeliyo istiraatijiyadda dalabka hababka ugu wanaagsan
Sida loo doorto qaabka astaanta raadinta Xayeysiiska 360
Kadib markaad si daacad ah u soo martay xiisadahan, waxa lagu siin doonaa 49 su'aalood oo imtixaan ah oo aad kaga jawaabto 60 daqiiqo gudahood. Oo, waxaad u baahan tahay inaad soo gudbiso imtixaanka ka hor inta uusan wakhtigu dhammaan si aad uga fogaato luminta tooska ah.
Waxaad u baahan tahay 80% ama guul ka badan si aad imtixaanka ugu gudubto. Sidoo kale, waa inaad ka taxadirtaa inaadan dhammaanin imtixaanka ka hor inta aanad dhammaystirin, si aad uga fogaato fashilka tooska ah (ma soo bilaabi kartid meesha aad ku istaagtay).
Sidoo kale, Search Xayeysiiska 360 Imtixaanka Shahaadiga ah waa mid ka mid ah koorsooyinka suuq-geynta dhijitaalka ah ee internetka ee bilaashka ah oo ay wataan shahaadooyin google-ka ah waa inaad sugtaa 24hrs haddii aadan ku gudbin imtixaanka. Marka 24hrs ay dhammaato, dib ayaad u noqon kartaa oo aad imtixaanka geli kartaa.
Haddii ganacsigaaga ama ganacsigaaga macmiilka ay ku hareeraysan yihiin alaabada Suuqgeynta Google, markaa noqoshada Maareeyaha Ololaha shahaadeysan waxay noqon doontaa guul weyn. Tani waa mid ka mid ah koorsooyinka suuq-geynta dhijitaalka ah ee khadka tooska ah ee bilaashka ah oo wata shahaadooyin Google ah oo loogu talagalay suuqgeynayaasha dhexdhexaadka ah.
Waa inaad khibrad u leedahay maareynta ololaha si lagugu guddoonsiiyo shahaadadan. Waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad fahamto gudbinta iyo cabbirka xayeysiiska.
Si aad u barato imtixaankaan, waxaa jira pdf hage waxbarasho laguu diyaariyay. Laakin, waxa fiican in aad khibrad dhab ah u leedahay maaraynta ololaha ka hor inta aanad imtixaanka gelin.
Tilmaamaha, waxaad ku baran doontaa;
Aasaaska Maareeyaha Ololaha
Mobile in Manager Campaign
Sida kor loogu qaado waxqabadka Maareeyaha Ololaha
Fiidiyowga ku jira Maareeyaha Ololaha
Marka la dhammeeyo hagaha, waxaa loola jeedaa inaad ku qaadatid 56 su'aalood imtixaan 60 daqiiqo gudahood. Waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad hesho 80% ama ka sareeya calaamadda si lagugu siiyo shahaadadaada.
Gal Koorsada Shahaadada Maareeyaha Ololaha
Ma ogtahay in wax ka badan kala badh wax iibsiga onlaynka ah ay ku dhacaan aaladda gacanta? Khibrada moobilka maaha mid ikhtiyaari ah toban sano ka hor, waa qasab.
Dhab ahaantii, sanadka 2021-ka saddex-meelood meel wax iibsiga intarneedka ayaa ku dhacay aaladaha mobilada. Markaa waad aragtaa, baahida loo qabo koorsada shahaadaynta khibrada mobilada waa lagama maarmaan.
Koorsada shahaadaynta khibrada mobilada waa mid ka mid ah koorsooyinka suuqgeynta dhijitaalka ah ee tooska ah ee bilaashka ah oo wata shahaadooyin google ah oo aad ku dari karto xirfadahaaga.
Inta badan mareegaha, iyo ganacsiga e-commerce, waxay fahmeen muhiimada ka jawaabista mobaylada. Laakiin inta badan mareegahaas aad bay ugu liitaan abuurista khibrad mobile oo wanaagsan.
Ugu yaraan taasi waa waxa 84% online Macaamiisha ay dhibaato kala kulmeen dhammaystirka wax-is-weydaarsiga internetka ee mobilada ayaa yidhi. Iyo, 40% macaamiishani waxay u yaaceen tartame ka dib khibradan xun ee mobilada.
Haysashada xirfaddan ayaa muhiim u ah ganacsiga internetka.
Koorsada, waxaad baran doontaa sida;
Maalgelinta Khibradda Mobilka ee Kobaca
Samee Hay'ad Diirada Saartay Isticmaalaha
Mudnaanta sii hagaajinta heerka beddelka
Diirada saar Xawaaraha Mobilka
Keen Safar Isticmaalaha Mobilka oo aan Xumaan lahayn
Bixi Khibrad Shakhsiyeedka Mobilka
Marka aad ka gudubto xiisadahan waxaad geli doontaa 50 su'aalood oo imtixaan ah oo qaadanaya 75 daqiiqo in lagu dhammeeyo. Si kastaba ha ahaatee, hubi inaad adeecdo shuruudaha imtixaankooda iyo siyaasaddooda.
Kaas oo ku lug leh;
Adiga ayaa ka jawaabi doona imtixaanka adiga, ma raadin doontid gargaar.
Ma koobiyayn doontid imtixaanka meel aad dadka kula wadaagto, mana soo saari doontid su'aasha imtixaanka.
Koorasyada suuq-geynta dhijitaalka ah ee tooska ah ee bilaashka ah ee wata shahaadooyinka Google waa koorso dijital ah oo cajiib ah oo la qaadan karo. Google ayaa kuu fududaysay inaad barato iyaga oo bixinaya koorsooyin qoraal iyo muuqaal ah oo intooda badan ah.
Markaa isku day inaad si degan u barato iyaga, oo u gudub si aad u muujiso shahaadadaada khadka tooska ah (waad u qalantaa) iyo loo shaqeeyahaaga.
Google waxa uu bixiyaa koorasyo ​​shahaado bixineed oo badan. Google Skillshop wuxuu bixiyaa koorsooyin badan oo ku siin doona shahaado marka uu guuleysto imtixaankiisa.
Haa, waxaad heli kartaa shaqo kadib markaad Google ka hesho shahaado. Shahaadooyinka Google waxaa laga aqoonsan yahay caalamka oo dhan, marka shirkadaha badankoodu waxay tixgelin doonaan CV-gaaga marka aad ka haysato shahaado Google.
Gaar ahaan IT, suuqgeynta dhijitaalka ah, falanqaynta xogta, goobaha maaraynta mashruuca.
12 Koorsooyinka ugu Fiican ee Khadka Tooska ah ee Suuq geynta oo wata Shahaadooyin
Koorsooyinka khadka tooska ah ee 17 ee Jaamacadda Washington
Tilmaamaha iyo adeegyada Kooras Onlineka ah ee Software Market ee Ed Sare
7 Kulliyadaha ugu jaban ee New York
6 Koorsooyin Injineernimo Hawada Sare oo Bilaash ah
10 Barnaamijyo Tababar Rakibaadda Qorraxda oo Online ah oo Bilaash ah
15 Koorso Duulimaad oo Lacag La'aan ah oo Online ah oo wata Shahaadooyin
Previous Post:5 Kaaliyaha Duulimaadka Barnaamijyada Tababarka ee Bilaashka ah
Post Next:10 Koorsooyin Kaaliyaha Maamulka ee Bilaashka ah oo wata Shahaadooyin